Umenzi wombhobho weTaper ogqwesileyo kunye neFektri | Gimarpol
Ubuhle: Uphawu lwasekhaya oludumileyo, umgangatho ophezulu,
ngokungqongqo ukuhlolwa kunye novavanyo, elungileyo emva-ukuthengiswa kwenkonzo.
Ixesha lokuzisa: iidavs ezi-3 emva kokuqinisekiswa kwentlawulo
Iintonga ze-drill zahlulwe zangamacandelo amathathu: iirandi ze-kelly, iintonga zokumba kunye neerill ezinzima. Ulandelelwano loqhagamshelo luyi-kelly (1) + yokugrumba umbhobho (n, umiselwe bubunzulu bequla) + umbhobho wokulinganisa onesisindo (n, esimiselwe kuyilo lwendibano yesixhobo sokumba).
I-kelly ibekwe kwindawo ephezulu yomtya we-drill, kwaye zimbini iintlobo zesikwere kunye ne-hexagonal .
HenXa kusombiwa, intonga ye-kelly ifaniswe nesiseko kunye ne-turntable yokuhambisa i-torque yokujikeleza komhlaba kwintonga yokuqhuba ukuqhuba umtya wokugrumba kunye ne-drill bit ukujikeleza;
Ukuthwala ubunzima obupheleleyo bomtya wokugrumba;
Umjelo wokujikeleza kolwelo lokomba.
Intonga yekelly yenziwe ngamalungu aphezulu nangaphantsi kunye nomzimba wombhobho. Umzimba wombhobho unezakhiwo ezibini: i-tetragonal okanye i-hexagonal (ubukhulu becala ukubhola kweoyile yi-tetragonal); umdibaniso ophezulu ngumtya wasekhohlo obhinqileyo (ukubopha ngasemva), odityaniswe nompompo, kunye nomtya wasekhohlo owasetyhini uthintela ukuwela ngexesha lokujikeleza; edibeneyo engezantsi Yintambo yesandla esisekunene, esidityaniswe ngombhobho wokugrumba. Xa usebenza, isiphelo esiphezulu sentonga ye-kelly sihlala singaphezulu komphezulu we-turntable, kwaye icandelo elisezantsi lingaphantsi komphezulu we-turntable.
Umbhobho wokugrumba yinxalenye esisiseko yomtya wokumba. Umsebenzi wayo ophambili kukuhambisa torque kunye nokuhambisa ulwelo lokomba, kunye nokwenza nzulu kwequla ngokuqhubekayo ngokwandiswa ngokuthe ngcembe kombhobho wokumba. Ke ngoko, umbhobho wokugrumba uhlala kwindawo ebaluleke kakhulu ekubombeni ioyile.
Ukubholwa kwesakhiwo sombhobho Umbhobho wokugrumba wenziwe ngombhobho wesinyithi ongenamthungo kunye nodonga lwe-9-11mm. Umzimba wombhobho kunye nokudibanisa kudibene ngokudibanisa i-welding.
Umbhobho omkhulu wokugrumba
Umbhobho wokumba onzima uyafana kumbhobho we-petroleum drill pipe, kodwa kunye nekholamu yentsimbi engenanto enobude obumalunga neemitha ezili-10. Nangona kunjalo, ubunzima bentonga enye bunzima kunobombhobho we-oyile, kwaye ubukhulu bodonga buphinda-phinda ama-3 amaxesha eentonga zokumba. Intonga enzima yokugrumba inxibelelene phakathi kwe-drill rod kunye ne-collar collar ukunqanda ukudinwa ngenxa yokutshintsha kwecandelo lomnqamlezo we-drill. Inokutshintsha indawo yendima yekhola yokugrumba, kodwa ukumiswa kwayo kulula, kwaye ukusebenza nokuqalisa kufanelekile, okunokonga ixesha lokuqalisa nokubaleka.
Egqithileyo Umbhobho wokumba wamalahle
Okulandelayo: Ukubhabha amatye kwomoya